‘Suecomma Bonnie’ Brand အတွက် ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ မတ်မတ် Kyo ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ – Trend.com.mm
‘Suecomma Bonnie’ Brand အတွက် ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ မတ်မတ် Kyo ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ
Queen of Korea လို့ပြောလိုက်ရင် ဘယ်သူ့ကိုပြေးမြင်မိကြမှာလဲ? Song Hye Kyo ပဲပေါ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်! အလှအပလား ဖက်ရှင်လားသရုပ်ဆောင်တာလား သူ မပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရလောက်တဲ့အထိ ပရိသတ်အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ မတ်မတ် kyo ဟာ အခုလည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံရိပ်ခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအသည်းကိုခြွေခဲ့ပြန်ပါပြီ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့က Song Hye Kyo ဟာ အမျိုးသမီးစီးဖိနပ်ဘရန်းဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ’Suecomma Bonnie’ အတွက် ကြော်ငြာရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးက ‘Shine On Me’ campaign နဲ့လည်းဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။
‘Shine On Me’ ဟာ မိန်းကလေးတိုင်း ကိုယ်ပိုင်ပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ် ဘ၀ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Campaign တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို Campaign အတွက်မော်ဒယ်လ်အဖြစ်ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကို “Suecomma Bonnei” က ချပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံတွေမှာဆိုရင် Song Hye Kyo ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖက်ရှင်လေးနဲ့ ခေတ်ဆန်လှပနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
Song Hye Kyo ဟာ ‘Suecomma Bonnie’ Shoe Brand အတွက် ကြော်ငြာပေးတာဖြစ်သလို သူမရဲ့ခပ်တိုတိုဆံပင်စတိုင်လ်ကလည်းလိုက်ဖက်ညီစွာဆွဲဆောင်မှုရှိနေပြန်ပါတယ်။တကယ့်ကို အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လိုပါပဲ။အသက် ၃၇နှစ်လို့ထင်ရက်စရာမရှိအောင်လှလွန်းပါတယ် ယူရေ 💗
အခုလက်ရှိမှာတော့ Song Hye Kyo ဟာ tvN ကရိုက်ကူးတဲ့ “Boyfriend” ဇာတ်ကားမှာ Park Bo Gum နဲ့အတူတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးအဲ့ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာလည်းပရိသတ်အားပေးမှုအများကြီးရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတော့ Song Hye Kyo ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Queen of Korea လို့ပွောလိုကျရငျ ဘယျသူ့ကိုပွေးမွငျမိကွမှာလဲ? Song Hye Kyo ပဲပေါ့ ဟုတျတယျဟုတျ! အလှအပလား ဖကျရှငျလားသရုပျဆောငျတာလား သူ မပိုငျတာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုရလောကျတဲ့အထိ ပရိသတျအသိအမှတျပွုခံရတဲ့ မတျမတျ kyo ဟာ အခုလညျးဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ပုံရိပျခပျမိုကျမိုကျလေးတှနေဲ့ ပရိသတျတှအေသညျးကိုခွှခေဲ့ပွနျပါပွီ။
ဒီဇငျဘာ ၁ရရကျနကေ့ Song Hye Kyo ဟာ အမြိုးသမီးစီးဖိနပျဘရနျးဒျတဈခုဖွဈတဲ့ ’Suecomma Bonnie’ အတှကျ ကွျောငွာရိုကျကူးပေးခဲ့ပါတယျ။ဒီကွျောငွာရိုကျကူးရေးက ‘Shine On Me’ campaign နဲ့လညျးဆကျနှယျနပေါသေးတယျ။
‘Shine On Me’ ဟာ မိနျးကလေးတိုငျး ကိုယျပိုငျပုံစံကိုရှေးခယျြနိုငျပွီး ကိုယျ့ပုံစံနဲ့ကိုယျ ဘဝကိုပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးနိုငျဖို့ရညျရှယျထားတဲ့ Campaign တဈခုဖွဈပါတယျ။ဒီလို Campaign အတှကျမျောဒယျလျအဖွဈရိုကျကူးပေးထားတဲ့ပုံရိပျတှကေို “Suecomma Bonnei” က ခပြွခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ဒီပုံတှမှောဆိုရငျ Song Hye Kyo ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖကျရှငျလေးနဲ့ ခတျေဆနျလှပနတောကိုမွငျတှရေ့မှာပါ။
Song Hye Kyo ဟာ ‘Suecomma Bonnie’ Shoe Brand အတှကျ ကွျောငွာပေးတာဖွဈသလို သူမရဲ့ခပျတိုတိုဆံပငျစတိုငျလျကလညျးလိုကျဖကျညီစှာဆှဲဆောငျမှုရှိနပွေနျပါတယျ။တကယျ့ကို အရုပျမလေးတဈရုပျလိုပါပဲ။အသကျ ၃ရနှဈလို့ထငျရကျစရာမရှိအောငျလှလှနျးပါတယျ ယူရေ 💗
အခုလကျရှိမှာတော့ Song Hye Kyo ဟာ tvN ကရိုကျကူးတဲ့ “Boyfriend” ဇာတျကားမှာ Park Bo Gum နဲ့အတူတှဲဖကျသရုပျဆောငျထားပွီးအဲ့ဒီဇာတျလမျးတှဲဟာလညျးပရိသတျအားပေးမှုအမြားကွီးရရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ။အခုတော့ Song Hye Kyo ရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သင့်ဆီက ဒါလေးတွေကိုလိုချင်ကြောင်း သူမပါးစပ်က ထုတ်ပြောမှာတော့မဟုတ်ဘူး…